अत्यधिक प्रभावशाली मानिसहरूको7वटा आदतहरू pdf - Free books download
अत्यधिक प्रभावशाली मानिसहरूको7वटा आदतहरू pdf
November 5, 2018 Adnan Aftab	0 Comments
हामी सबै सफल हुन चाहन्छौं। र सफलताको बाटो हाम्रो बानीमा हामीलाई मदत गर्न सक्ने बानीहरूको पहिचान गर्न हो। म स्टिफन कोभरीको सर्वश्रेष्ठसेलर पढेर यो मार्ग सुरू गर्न सिफारिस गर्छु, “अत्यधिक प्रभावकारी मानिसहरूको पीडीएफको7बानीहरू”।
1 99 8 मा यसको पहिलो प्रकाशनमा, उच्च प्रभावकारी पीडीएफको7आदतहरू लगभग तत्काल सर्वोत्तम विक्रेता थिए। र यो चाँडै सांस्कृतिक लक्सिको स्थायी भाग भयो। दुनियाभर 40 भन्दा बढी भाषाहरूमा 25 मिलियन भन्दा बढी प्रतियां बिक्यो। यस पुस्तकले लाखौं पाठकहरूलाई उनीहरूको जीवनमा अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
उच्च प्रभावी मान्छे को7बानीहरु pdf गाइड कदम द्वारा कदम:
1 उच्च प्रभावी मान्छे को7बानीहरु pdf गाइड कदम द्वारा कदम:
सफल हुने मानिसहरूका बानीहरू के हुन्? अत्यधिक प्रभावकारी व्यक्तिहरूको7आदतहरू पाठकहरू 25 वर्षसम्म कैदी छन्। यसले राष्ट्रपति र सीईओ, शिक्षक, आमाबाबु र विद्यार्थीको जीवन परिवर्तन गरेको छ। छोटो समयमा, सबै उमेर र व्यवसायका लाखौं मान्छे डा। कोवेई को सात आदतको पुस्तकबाट लाभ उठाइएका छन्। र, त्यो तपाईंलाई बदल्न सक्छ।
सक्रिय हुनुहोस्: प्रभावको सर्कल र चिन्ताको सर्कलको अवधारणामा छलफलहरू। तपाईंको प्रभावको केन्द्रबाट काम गर्नुहोस् र लगातार विस्तार गर्न काम गर्नुहोस्। बस्न नगर्नुहोस् र सक्रिय मोडमा पर्खनुहोस्, समस्या लिनुमा समस्याहरू पर्खनु पर्दछ।
अन्तमा अन्तमा सुरू गर्नुहोस्: भविष्यमा के चाहानुहुन्छ कल्पना गर्नुहोस् ताकि तपाईं काम गर्न र तदनुसार योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुहोस् कि मानिसहरू कसरी उनीहरूको जीवनमा निर्णय गर्छन्। प्रभावकारी हुन, तपाईंले सिद्धान्त अनुसार कार्य गर्नु पर्छ र लगातार तपाईंको मिशन स्टेटमेन्टको समीक्षा गर्नुपर्छ। तपाई को हुन चाहानुहुन्छ? म आफैलाई के भन्न चाहन्छु? तपाईं कसरी सम्झन चाहानुहुन्छ?
चीजहरू राख्नुहोस्: नेतृत्व र व्यवस्थापन बीचको फरक कुरा गर्नुहोस्। बाह्य संसारमा नेतृत्व व्यक्तिगत दृष्टि र व्यक्तिगत नेतृत्वको साथ सुरु हुन्छ।
विजय विचार गर्नुहोस्: तपाईंको सम्बन्धमा पारस्परिक लाभकारी समाधान वा सम्झौताको सम्झौता। सबैको लागि विजयी सहित व्यक्तिलाई वैवाहिक र सम्मान गर्नु अन्ततः एक राम्रो दीर्घकालीन समाधान हो।
पहिले बुझ्न खोज्नुहोस्, त्यसपछि बुझ्न: एक व्यक्तिलाई साँच्चै बुझ्न समानुपातिक सुन्न प्रयोग गर्नुहोस्। यसले सकारात्मक समस्याहरूको हेरचाह र संकल्पको वातावरण सिर्जना गर्दछ।
सिंकर्जिज: सकारात्मक टीमवर्क को माध्यम ले मान्छे को बल को संयोजन। लक्ष्य प्राप्त गर्न को लागी कसैले कसैलाई प्राप्त गर्न सकेन।
हेरेको तीव्रता: एक स्थायी, दीर्घकालीन, प्रभावकारी जीवनशैली सिर्जना गर्न तपाईंको स्रोत, ऊर्जा, र स्वास्थ्य नवीकरण र नवीकरण।
उच्च प्रभावी मान्छे को7बानी को लेखक को बारे मा pdf:
स्टीफन आर। कोवी नेतृत्व र पारिवारिक सम्बन्धमा विश्व प्रसिद्ध प्राधिकरण थियो। उहाँ युटा विश्वविद्यालयबाट स्नातक विज्ञान स्नातक गर्नुहुन्छ, एक हार्वर्ड एमबीए र पीएच.डी. ब्रघाम यिन विश्वविद्यालय बाट। श्री Covey फ्रैंकलिन Covey कम्पनी बोर्ड को उपाध्यक्ष थियो र एक व्याख्याता, शिक्षक र संगठनात्मक सलाहकार भएको छ। आफ्नो क्यारियरको दौडान डा। कोवेले लाखौँ पाठकहरू र विद्यार्थीहरूलाई नयाँ दृष्टिकोण र समझ ल्याएका छन्।
अब, तपाईं अत्यधिक प्रभावी मान्छे pdf को7बानी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो पुस्तक परीक्षण गरिएको छ र सुरक्षित फेला पर्यो!
← အလွန်အမင်းထိရောက်သောပြည်သူ့ pdf ၏7အလေ့အထများ
د خورا اغیزمنې خلکو پیسو7پی پی ایف pdf →
အလွန်အမင်းထိရောက်သောပြည်သူ့ pdf ၏7အလေ့အထများ